Tag: ahịa roi | Martech Zone
Tag: ahịa roi
Ndị otu na Uberflip ewerela ụzọ zuru ezu iji gbakọọ ịre ahịa azụmaahịa gị na itinye ego, ma tinye ya na infographic uber a. Ewu ewu na nke ọdịnaya ọdịnaya bụ-apụghị ịgbagha agbagha. Dabere na Marketinglọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọdịnaya, ihe karịrị 90% nke ụdị na-etinye ego ugbu a na eBooks, vidiyo, mgbasa ozi mmekọrịta, ịde blọgụ, na ọwa ndị ọzọ. Otú ọ dị, ọ bụ nanị ihe na-erughị ọkara n’ime ha maara nke ọma otu esi agbaso ihe ịga nke ọma nke mgbalị ha. Naanị m na ndụmọdụ
Ternyaahụ, emere m otu nnọkọ na Social Media Marketing World a na-akpọ Otu esi agbanwe site na ndị na-eso ụzọ na-eto eto na ịmịpụta nsonaazụ na Social Media. M na-abụkarị onye megidere ndụmọdụ a na-agbanye na ụlọ ọrụ a… na-adaberekarị na esemokwu ahụ. Ezi mbido bụ na azụmaahịa na-aga n'ihu na-achọ onye na-akwado ya na onye na-eso ụzọ na mgbasa ozi mmekọrịta - mana ha na-arụ ọrụ jọgburu onwe ya nke ịtụgharị ndị na-ege ntị dị ịtụnanya.